MUQDISHO, Somalia - Taliska ciidamada difaaca ee Itoobiya ayaa shaaciyay in weerar cirka ah oo ay ka fuliyeen Tuulada Buur Haybe, oo 75-KM dhanka Bari uga beegan magaalada Baydhabo, ay ku dileen 35 kamid ahaa kooxda Al-Shabaab.
War saxaafadeed oo uu talisku soo saarey ayaa lagu xusay in duqaynta oo la qaaday 24-kii bishaan xubnaha lagu khaarijiyay ay ku jiraan labo saraakaal kuwaasi oo magacyadooda lagu kala sheegay Abdu Cismaan iyo Cabdisalaam.
Cismaan ayaa ahaa madaxdii howlgalada ee Aagaasi, halka Cabdisalaam uu ahaa madaxii Bambaanooyinka, sida lagu sheegay warka, oo aanan lagu caddeynin fahfaahin dheeri ah oo ku saabsan magacyada waalidkooda.
"Howlgalka sidoo kale waxaa lagu waxyeeleeyay afar gaari oo nooca xamuulka ciidamada ah…iyo shan qori oo casri ah," ayuu talisku intaasi raaciyay, sida ku cad bayaanka oo warbaahinta loo digay.
Dhanka kale, gudoomiyaha Al-Shabaab u qaabilsan gobolada Bay iyo Bakool, Sheekh Cabdullaahi Macalin Geedow oo xaqiijiyay duqaynta ayaa meesha ka saarey inay ka dhalatay wax khasaaro ah.
Weerarkaan cirka ah oo aysan wali ka hadlin dowlada Soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyada oo Itoobiya ay horaantii bishaan ku hanjabtay weerar aargoosi oo ka dhan ah kooxda cilaaqaadka la leh Al-Qaacida.
Hanjabadaasi ayaa ka dambeysay markii ay Al-Shabaab ay gobolka ku beegsatay kolanyo ay la socdeen ciidamo Itoobiyaan ah, halkaasi oo looga dhaawacay afar kamid ah, wallow xoogaga ay tilmaameen dilka tobaneeyo.